Lasa 27.521 isa mantsy izany raha nahatratra 28.013 tamin’ny taon-dasa. Noho ny havitsian’ireo mpiadina tao amin’ny taona fahavalo niakatra tao amin’ny taona fahasivy no nambaran-dRamananantony Lalaina, lehiben’ny fari-piadidiam-pampianaran’Antananarivo fa antony. Hiparitaka amina foibem-panadinana miisa 32 izy ireo manomboka anio raha miisa fito kosa ny ivontoerana hanaovana ny fitsarana. 10 taona no zandriny indrindra raha 67 taona no zokiny. Ny taranja Malagasy no hisantaran’ireo mpiadina izany anio alatsinainy maraina raha ny taranja siansa sy ny maha olona kosa rahariva. Ny taranja kajy sy ny frantsay indray rahampitso, arahin’ny tantara sy jeografia sy ny fizika ary hofaranana amin’ny taranja anglisy amin’ny alakamisy ho avy izao. Marihina moa fa noho ny fandalovan’i Papa Fransoa eto amintsika nanomboka ny zoma lasa teo ka nanapaka lalana maro dia efa saika nandray fepetra mifandraika amin’izay avokoa ny ankamaroan’ireo ray aman-dreny manan-janaka hiatrika ity fanadinam-panjakana iray ity.
Ireo taranja atahoran’ny mpiadina
Tamin’ny sabotsy teo dia efa afaka nijery ny efitrano hiatrehany ny fanadinana BEPC ireo mpiadina tamin’ny faritra maro teto amintsika. Ny mba nahafahan’izy ireo naka aina tanteraka omaly alahady ary hananany filaminana mialoha ny fanadinana anio maraina no tanjon’ireo tompon’andraikitra. Maromaro ihany ireo taranja mbola atahoran’ny mpiadina, eny fa na dia efa nianatra sy nilofo aza izy ireo. Anisan’ireny ny histo-géo izay nambaran’ireo mpiadina fa mampanahy hatrany ny fipetraky ny laza adina noho ny halavan’ny lesona. Eo ihany koa ny matematika sy ny fizika, indrindra fa eo amin’ireo sokajy manahirana ka rehefa diso ny voalohany dia diso hatrany amin’ny farany ny devoara…. Anisan’ny efa nisokatra tamin’ny sabotsy teo moa ny lisea maoderna Ampefiloha nandray ireo mpiadina nijery ny efitranom-panadinana. Miisa 44.50 ireo mpiadina voasoratra anarana hiatrika izany ao an-toerana ka 11 taona no zandriny indrindra raha 23 taona no zokiny indrindra. Mizara amina efitranom-panadinana miisa 95 izy ireo ka ny 62 no ao amin’ny LMA raha any amin’ny LTC kosa ny 32 isa ambiny.